Ufunda njani ukuzoba: iipensile zokusebenzisa, iphepha kunye namanyathelo okuqala | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Ufunda njani ukuzoba
UManuel Ramirez | | Amaqhinga, Tutorials
Ukuzoba, njengamacandelo amaninzi ebomini, kufuna izinto ezininzi ukuze ube nakho ukubanetalente kuyo. Inye yingqondi ngokwakhe okanye ukukhululeka kwabantu abathile ekufuneka besungule imigca kwaye benze imizobo eyenziwe kakuhle okanye abanolo loyilo loyilo olubenza babonakale. Omnye umzamo kunye nomnqweno wokuphucula ngeeyure kunye neeyure. Zininzi iimeko zeekhathuni ezikumgangatho wehlabathi eziqale ngemizobo engathembisanga kangako ngekamva labo, kodwa ngenxa yobuchule kunye nonyamezelo kwiminyaka edlulileyo, baba ziingcali.
Bafuna ukuqhubeka kwaye babe nomonde omncinci wokuya "kuzoba" ubuchule bethu kwaye bafumane loo ndlela yokufunda ukuze baphumelele. Namhlanje wena Siza kufundisa indlela yokufunda ukuzoba kwaye zeziphi iziseko ukuzoba. Singasebenzisa izixhobo ezahlukileyo ezinjengamalahle okanye ipensile enye, nangona singaze silibale irabha kunye nokusika esinokufumana elona phuzu liphezulu kwipensile, kwaye ke sifezekise iziphumo ezingcono ngokwazi ukufaka iinkcukacha ezifuna ngaphezulu Ukuchaneka.
1 Izixhobo kufuneka sifunde ukuzoba
2 Ipensile namalahle
3 Zeziphi iipensile esizisebenzisayo ukuzoba?
4 Iindidi zamaphepha okuzoba
4.1 CA Grain Canson
5 Uzoba njani
6 Izixhobo kwiwebhu ukufunda ukuzoba
7 Ukugqiba: ukungagungqi
7.1 Iibhanki ezivela kwi-reddit
7.2 URay sampang
7.3 UMarc Allante
7.4 Inkqubela phambili yeminyaka emi-3: EndOfAllHope
7.5 UNowa bradley
Izixhobo kufuneka sifunde ukuzoba
Kufuneka siyazi loo nto isixhobo esisesandleni sethu kubaluleke kakhulu Ukuze uqondise ngcono imigca eya kwenza umzobo wethu. Kukho umahluko omkhulu phakathi kokuzoba ngenqaku elingatsalwanga kakuhle, kulowo osele enze imivumbo emininzi kwaye ekhala kuthi ukuba siyidlulise ngesiloli seepensile okanye sisebenzise umsiki.
Kufana nokuthatha ibrashi ebanzi kwaye uzama ukuzoba umgca ococekileyo. Akunakwenzeka. Sidinga ibrashi entle kakhulu ukuze sikwazi ukuzoba loo migca ezikwaziyo ukucacisa iinkophe zeliso lomntu okanye ikona yemilebe. Ngesi sizathu, ukuziqhelanisa nokungaguquguquki ngokuhamba kwexesha kubaluleke kakhulu ukuze sikwazi ukuqeqesha ngcono isandla sethu, kuba izihlunu zayo ziya kuba zezizo eziququzelela ukuba ngomzuzwana kufuneka sibashiye bekhululekile ukuze benze umgca othe ngqo okanye isangqa esifanelekileyo .
Ngapha koko, Qaphela ukuba kuthatha umonde omninzi kunye nomoya olungileyo. Musa ukudana kwaye uziqhelanise kakhulu nezixhobo eziza kuthi ngenye imini zenze kube lula ngathi ukubonisa imizobo yethu okanye, kwindlela engaphantsi, xa sizobe phambi kwabantu abaninzi, basijongile njengokuba sisenza umtya wokuhlekisa umlinganiswa ngaphandle kwento.
Ipensile sisixhobo esingxamisekileyo sokuqalisa kulo mzobo. I-Wikipedia ichaza ipensile njengesixhobo sokubhala, ukuzoba okanye ukupeyinta Ebandakanya ibha ende, ebhityileyo, enesilinda esinegilayithi okanye enye into yezimbiwa ngaphakathi, ethi gqi kwelinye icala lale bar xa ilolwa.
Njengayo yonke imizobo oza kuyibona apha, ndiyenzile le ngepensile:
Kukho imizekeliso kunye neekhathuni ezisebenzisa ipensile yoomatshini, enesakhono sokuhlala sinelona nqaku lichazwe kakuhle, Ke kwimizobo ethile inokufika ngokufanelekileyo. Nangona iyakuba yipensile, kunye nobuchule ekusetyenzisweni kokufumana indawo elungileyo, isixhobo esiza kusivumela ukuba sibe yingcali yokuzoba.
Kukwangumbandela wokufumana esona sixhobo sihlangana ngcono kwaye sikwazi ukufumana okuninzi kuso. Kwimeko yam, ndiye ndakuqhela ukusebenzisa ipensile yomatshini xa uzobe oonobumba, ngelixa Ndisebenzisa ipensile kwimodeli yokuhamba ze, ukusukela ngokucinezela icandelo eliphambi kwencam, ngendlela ethe tyaba, kulula ukuba umthunzi ngokukhawuleza, xa sithetha malunga nemizuzu emi-3, 5 okanye eli-10 apho kufuneka ukhawuleze.
Njengoko benditshilo, siya kufumana isixhobo esiya kuthi silungele eyona misebenzi. Njengakwiphepha, kuba imathiriyeli apho sicofa khona incam yegraphite yepensile, iya kuvumelaSifumana imibala eyahlukeneyo okanye ipensile ye-6B inefuthe elingcono xa sifuna ukwenza amagqabi ehlathi, umzekelo.
Zeziphi iipensile esizisebenzisayo ukuzoba?
El Eyona nto iphambili ipensile yeHB, eya kuthi isivumele, ngoxinzelelo olukhulu okanye oluncinci, ukuba sizobe izithunzi zobukhulu obukhulu okanye obuncinci. Yeyona ipensile ibhetyebhetye kwaye esiza kuthi sibuyele kuyo amaxesha amaninzi kwimizobo.
Emva koko, kunomdla ukuba ne- Ipensile 2B ukwenzela ukuba izithunzi esinika zona zibe lula ukufezekisa, okanye sifuna ukuxhasa i-duct yeliso kunye nomzobo ochanekileyo. Ukusuka apha sizakuqhubeka ukufumana i-4B kunye ne-6B, ukuqinisekisa ukuba iindawo ezimnyama nezimnyama zinikwa ngokukhawuleza ukuba ziqhubele phambili neminye imisebenzi.
Kwakhona Siza kufumana umahluko omncinci phakathi kweepensile zeemveliso ezahlukeneyo, njengalezo zeStaedler.
Iindidi zamaphepha okuzoba
El iphepha lenziwe ngemicu yamanzi kunye neselulosi, ke kuya kufuneka uqonde ukuba okokuqala unamathisele. Ukuba sithathe igqabi sayimanzisa, siza kukwazi ukuyifumana uncamathisele. Zininzi izinto eziyinxalenye yezi zinto zininzi, ezinje ngomqhaphu, amadlavu kunye neenkuni.
Kukho oko kuthathelwa ingqalelo izigama ezahlukeneyo ezisetyenziselwa ukucacisa uhlobo lwephepha. Olu tshintsho luya ngokwamazwe, nangona sizakuya kwimigqaliselo efana negrama, yona leyo ngumlinganiso wobukhulu kwimicron zemilimitha yemitha kwaye bubungakanani bephepha eligqiba ukugqiba ubunzima bayo kwimitha nganye nganye.
Sigqamisa iphepha leIngres, eliyi- umgangatho wephepha le-vergé, laziswe ngumzobi ofanayo kwaye eli linike igama kolu hlobo lwephepha elisetyenziswa ngokubanzi ekuzobeni ubuchwephesha kwezobuGcisa obuhle kwiindlela ezomileyo.
Ekuqaleni, akukho sidingo sokuchitha imali eninzi ukuze ube nazo zonke iintlobo zamaphepha, iipensile kunye nezinye izixhobo. Ngepensile elula, ipensile yokulola kunye nokucima sinokuluqala uhambo lwethu. Sithatha iphepha kwiphepha lomtsalane, kwaye sinokuqala ukuzoba izangqa kunye nazo zonke iintlobo zeemilo ukuze sifunde.
El Iphepha leMarquilla sesinye seziseko zokuqala ukuyeka isandla. Uqoqosho kakhulu kwaye ubhetyebhetye kakhulu. Akukho sidingo sokuchitha ngaphezulu, kwaye ngokuhamba kwexesha siya kuba nakho ukwenza imizobo ekumgangatho ophezulu kulo naluphi na uhlobo lwephepha, nokuba kuyafana. Ewe kunjalo, siya kufumanisa ukuba kukho iintlobo ezithile zephepha eziya kuthi zisincede ngcono kumalahle okanye kumhlaba wepensile.
Xa sifuna into ebaluleke ngakumbi, sinako yiya kwi «Basik Guarro», iphepha elimhlophe lendalo, Incanyathiselwe kakuhle kwaye inikezela ngobulukhuni kunye nokuqheleka kumphezulu wayo. Ungayifumana nakweyiphi na ivenkile yokubhala kwaye isetyenziswa kakhulu ngabafundi baseyunivesithi abadlula kwinqanaba lobuGcisa oluLungileyo ukwenza zonke iintlobo zemizobo. Masithi yincwadi yesketsch ebalulekileyo. Ngu-130 g / m2 kwaye ilungele ipensile, i-inki kunye ne-wax. Singayisebenzisa kwimidiya exubekileyo. Ngokubanzi sijamelene nendima ebhetyebhetye kakhulu.
CA Grain Canson
Le ndima yaziwa kakhulu kwaye yenye yeempawu oya kuthi wenze kuyo, ngenxa yomgangatho ophezulu weemveliso zabo. I-180 g / m2 eyenziwe kakuhle, ipeyinti emhlophe yokuzoba iphepha elimhlophe. Enye into ebalulekileyo kwimizobo kunye nemizobo.
Este iphepha elimhlophe elibekiweyo, ngokuchaseneyo neyangaphambili, kuba ijolise kubuchule obomileyo njenge-sanguine, amalahle, ipensile kunye ne-pastel. Inikeza ubunjani obugqwesileyo kunye nokuxhathisa ngokupheleleyo ekuthambiseni nasekugxumleni. Kungenxa yokuba yi-30% yomqhaphu, eyenza ukuba izive ifudumele kakhulu.
Sinayo I-SchoellersHammer matte, igouache efanelekileyo, ipensile kunye neendlela zobugcisa. Kuphantse ukuba singatsho ukuba iphepha libonakalisiwe kuloo misebenzi kufuneka siyithengisele umthengi okanye sisipho esigqibeleleyo. Owo mzobo oza kuthatha inkathalo enkulu kuthi, uya kufumana olona manyano lubalaseleyo apha. Imizobo, amagcisa ayimizobo kunye nabazobi bacelwa ukuba bathenge incwadi yamanqaku kolu luhlobo.
Utitshala wam oopopayi kwisikolo se-ESDIP, wayesoloko esixelela ukuba masithathe naliphi na ixesha sizobe izangqa, uxande kunye nemigca ethe tye. Ukuziqhelanisa kwenza ugqibelele, kwaye oku kubaluleke kakhulu xa kuthathelwa ingqalelo amanyathelo okuqala oza kuwathatha. Singathatha incwadana kwaye sinikezele amaphepha ayo ukuzoba izangqa nokuba ziye zonakala. Masithi kufuneka siziqhelanise nokuzithemba kwaye ukubetha kwethu kusinika oko lula.
Enye into ebalulekileyo kukukhuphela iifoto kunye nokubeka ephepheni intetho yemodeli xa ebuza, isilwanyana esikwimagazini yendalo okanye ukufuna umbono kwifoto yendlela yedolophu. Kuya kufuneka uyazi nokuba ujonga njani kwihlabathi elisingqongileyo, kwaye ude ubuze usapho okanye abahlobo ukuba basimise, Kuya kufuneka sizobe yonke into esinokufikelela kuyo! Nokuba kungaphantsi komhlaba, epakini okanye naphina, umzobo wendalo ngumthambo omkhulu kwaye simahla.
Lo okokuqala kukuzoba izangqa, nokuba bayaphazama:
Ngokuziqhelanisa okuncinci siya kuphucula umgca kunye nokuma.
Después zama ukuzoba imigca ethe nkqo kunokwenzeka:
Okokugqibela sinokudlulela ekuzobeni iimilo zejiyometri ukuze siziqhelise:
Kufuneka ithathelwe ingqalelo into yokuba imigca yokuzoba kunye nezangqa ziya kusivumela ukuba senze iziketshi zokuqala yomntu. Kumzekeliso okanye nakwindalo yabalinganiswa bekhathuni, iqala ngomzobo wesangqa kunye nomgca wokusebenza.
Oko Umgca wesenzo ngowona wenza isenzo somntu okanye uphawu. Ukusuka apho singahamba malunga nokubumba onke amalungu omntu okanye esilwanyana. Kwimzobo elandelayo endiyenzileyo kaBatman, inokufunyanwa njengenxalenye ukusuka entanyeni ukuvela kuwo wonke umzobo ngokungathi ngumqolo wakhe.
La malungu aya kuba izotywe ngeemilo zejiyometri ezifana nesifuba, isisu okanye ingaba yintoni imilenze okanye iingalo. Omnye umzekelo ngulo:
Kufuneka usoloko zoba iimilo zejiyometri ezisivumela ukuba senze imilinganiselo ngqo emva koko ungene kwiinkcukacha. Ngumgaqo onokusetyenziswa kubuchule obuninzi bobugcisa, nokuba lolwakhiwo okanye ubhale nencwadi. Uninzi lwababhali babhala ubuninzi bencwadi ngaphandle kokuya kulungiso lwegrama, ukuze "baphume" ibali liphela. Okokugqibela baya kuqhubeka baphonononge kwaye bahlaziye ukupholisha kunye nokuphelisa ezo ndawo zingenamdla; Singadlulisela oku kumzobo ngerabha yethu, eya kuthi icime iinxalenye zomzobo ezingakulungelanga ukwenziwa.
Kukho amaqhinga amaninzi kumzekeliso kunye nokuzoba. Ngokufanelekileyo, fumana yonke into entlokweni yakho kwaye uzobe nantoni na, kodwa ngenxa yoko kuthatha iitalente ezininzi okanye iminyaka yomsebenzi. Kuya kufuneka uthobeke ngakumbi kwaye uthathe irabha ngesandla okanye usebenzise umfuziselo ukukopa iinxalenye eziza kusinceda ukuba sifunde kwaye ngenye imini siya kuba nakho ukuzoba nantoni na efika engqondweni.
Ndikushiya ngomnye umsebenzi, kodwa sele ndisebenzisa ukujikeleza okumnyama:
Izixhobo kwiwebhu ukufunda ukuzoba
Ngaphambi kokuba i-Intanethi ingabikho, ekuphela kwendlela yokufunda ukuzoba Sasizifundise ngokwethu umbulelo kwincwadi esasinayo, okanye ukuya kwi-akhademi okanye kwisikolo sobugcisa apho basifundisa khona.
Ukusukela namhlanje, sinamakhulu ezixhobo kwiwebhu apho sinokufumana iitutorials ukusifundisa ukuzoba abalinganiswa, imizobo, imihlaba, uyilo okanye nayiphi na indlela yangoku evumela ukuba sandise umsebenzi wethu.
Kukho iiwebhusayithi ezininzi ekufuneka zithathelwe ingqalelo ukuyazi imigangatho Iziganeko zangoku kunye nendlela esinokufumana ngayo izixhobo ezingapheliyo kuzo.
Es uthungelwano lwentlalo ngokugqwesa okwangoku okufunyanwa ngabazobi abaziingcali nkqu nabo baqala njengathi. Xa sizazisa ngokwethu ukupapasha imizobo yethu, kusebenza ngokukuko ukufumana ingxelo yabanye abaza kuqala ukusilandela. Yindlela elungileyo yokufumana indawo kunye nokwabelana ngezimvo kunye nokuba yinxalenye yoluntu lwamagcisa.
Omnye iwebhusayithi ngeSpanish ngaphandle kokubonelela ngezifundo ezininzi, abaninzi bahlawula, lelinye lamaziko emithambo-luvo yoyilo kulwimi lwethu. Sisalathiso, ke unokuyikhomba kwiintandokazi zakho.
Okunye zesalathiso esikhoyo kwi-Intanethi sokuzoba kunye noyilo. NjengoBehance, unokufumana zonke iintlobo zamagcisa, nokuba ziingcali okanye ziingcali. Yenye yezinto ezibalulekileyo kwaye unokwenza iakhawunti yakho kwaye ulayishe imizobo yakho ukubonisa izimvo zakho, iiqhula zakho okanye amabali akho.
Ukuba uthetha isiNgesi kakuhle, iiforamu zabo zezona zibalaseleyo kwi-Intanethi zokucela uncedo Kwaye inani elikhulu lamagcisa likunika izikhokelo, izixhobo kunye nengxelo eyimfuneko ukuze ukwazi ukuvela kumzobo wakho. Baninzi abaqale phantse ngokubhala kwaye ngoku basebenzisa umvuzo wenyanga ngokwenza eyona bayithandayo.
Enye iwebhu enkulu, nangona kunjalo ezinikele ikakhulu kwimizobo yedijithali kunye noyilo ngandlela zonke. Ingxaki kukuba awuyi kukwazi ukufaka imidwebo yakho ngaphandle kweakhawunti ekhethekileyo enokufumaneka kuphela ngesimemo. Ukuba kukho umntu omaziyo onezimemo, uyazi.
Sibonise amanyathelo ekufuneka siwathathe ekuqaleni, isekhona indlela ende yokuhamba kunye nolwazi lweendlela ezininzi. Into esiza kuyenza kukubonisa ukuba yintoni ukuzimisela kunye nokuzingisa okunokukufezekisa. Eminye imizekelo yeekhathuni ukuba imizobo yabo yokuqala ibingeyiyo eyona intle, ukuba kwiminyaka nje embalwa, bakwazile ukufikelela kwiziphumo ezigqwesileyo. Ewe kunjalo, kufuneka ubenobugcisa obuncinci kwaye kuya kubakho abantu abaza kuhamba phambi kwakho ngexesha elincinci, kodwa indlela yokugqibela ikhona phantse kuwo wonke umntu ukuba sisusa izithintelo nomsebenzi. Ewe, italente ezalwa ngaphakathi iya kuhlala inceda njengendawo yokuqala elungileyo.
Ezi zi eminye imizekelo yamagcisa, unokufumana okuninzi apha.
Iibhanki ezivela kwi-reddit
Inkqubela phambili yeminyaka emi-3: EndOfAllHope
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Tutorials » Ufunda njani ukuzoba
Umhlaba njengobugcisa: imifanekiso yesathelayithi evela kwinkqubo yeLandsat
Xa iinkosazana zeDisney zibeka iimagazini ezinje ngeVogue okanye iCG